आफ्नै जीवनसँग किन खेलवाड ? - Deshko News Deshko News आफ्नै जीवनसँग किन खेलवाड ? - Deshko News
आफ्नै जीवनसँग किन खेलवाड ?
काठमाडौं कालिकास्थान–मैतिदेवीको भित्री सडकमा बिहीबार साँझ मानिसको भिड बाक्लो थियो । कतिपय मानिस खाद्याह्न र तरकारी खरिदमा झुम्मिएका थिए ।
उपचार विधि पत्ता नलागेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले अहिले विश्व प्रभावित बनाएका बेला नेपालमा हुने सम्भावित जोखिम रोक्ने उद्देश्यले सरकारले यही चैत ११ गतेबाट अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणमा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लागू हुनेछ, तर त्यसलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकारको उद्देश्य कोही मानिस एक अर्कासँग सम्पर्कमा जान नपाओस् भन्ने हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा महामारीको रुप लिँदै गएको कोभिड–१९ एउटा सरुवा रोग भएकै कारण मानिसमा सजिलै फैलन्छ । त्यसैले नेपालमा रोग फैलनु अघि नै सावधानी अपनाउन सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश जारी गरेको हो । तर, सर्वसाधारणले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएको छैन । यस्तो समस्या जिल्ला जिल्लामा देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर र भिडियोहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
विपद्का बेलामा आत्तिनु हुँदैन । यो कम्जोर भाइरस हो भनेर केवल आफ्नो भावना र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । खानपिनमा अरु बेला जस्तै ब्यस्त रहनुपर्छ । गीत सङ्गीतमा रमाउँदै आफू र परिवारलाई व्यस्त बनाउनुपर्छ । बालबालिकाका लागि उमेर पुगेका आफ्ना आमाबाबुलाई सेवा र सत्सङ्ग गर्ने यो उपयुक्त समय पनि हो । परिवारमा रमाइलो वातावरण बनाउनुपर्छ, ता की सबै खुशी हुन पाओस् ।